Di Matteo Oo Sheegay Inuusan Isbedel Badan Ku Samayn Doonin Chelsea - jornalizem
Di Matteo Oo Sheegay Inuusan Isbedel Badan Ku Samayn Doonin Chelsea
Tababaraha naadiga Chelsea ee 42jirka ah oo bishii hore noqday tababaraha rasmiga ah una hogaamiyey kooxdiisa inay ku guuleysato Koobka FA iyo Championka kadib markii uu kala wareegay kooxda Andre Villas-Boas oo hadda noqday macalinka Tottenham ayaa ka hadlay sida uu noqon doono qorshaha kooxda Chelsea.
Didier Drogba iyo Salomon Kalou ayaa laga yaabaa in ay ka tagaan kooxda balse Chelsea ayaa waxa ay u dhaqaaqday in ay keensato ciyaaryahanka qadka dhexe Eden Hazard iyo Marko Marin iyo sidoo kale laacibka reer Brazil ee kooxda Porto ee Hulk.
Di Matteo oo ah tababarihii siddeedaad ee soo mara Chelsea tan iyo intii uu la wareegy Roman Abramovich ayaa dareensan in uusan u baahnayn in isbedel badanuu ku sameeyo kooxda ka gashay kaalianta lixaad horyaalka Ingiriiska.
“Ma filayo in wax fudud ay tahay mana rajaynayo in isbedel badan aan ku sameeyo kooxda.”ayuu yiri Di Matteo.
“Ma filayo in ay jirto degdeg badan,laacibiin cusub ayaan keeni doonaa kooxda waxana aan isku dayi doonaa sidii ay u noqon lahaayeen kuwa la qabsada naadiga.”
Di Matteo ayaa intaa ku daray: “Ma arko sabab aan u sameeyo isbedel, sidii hore ayaan ahaanayaa,qaabka aan u shaqeeyo waa sidiisii taana ma bedelmeyso mustaqbalka.
Di Matteo waxa u sheegay in uu rumeysan yahay inloo baahan yahay in kooxda dhulka laga qaado marka loo eego horyaalka Ingiriiska oo ay 25 dhibcood ay ka hooseeyaan kooxda ku guuleysatay isagoo ku tilmaamay in shaqo badan ay hortaal.